စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာ ပါဝင်တဲ့ sensor အမျိုးအစားများ – DigitalTimes.com.mm
စမတ်ဖုန်းတွေဆိုတာ မတူညီတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မတူညီတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်စုပေါင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးလို့တောင် ပြောရမလိုပါပဲ။ အမြင့်စားကင်မရာတွေကစလို့ GPS ထောက်လှမ်းနိုင်တာတွေအထိ၊ screen အလင်းကိုအော်တိုချိန်ညှိနိုင်တာကစလို့ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို စောင့်ကြည့်ပေးနိုင်တာတွေအထိ ဒီလို စုံစီနဖာလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် ပါးပါးသေးသေးစမတ်ဖုန်းထဲမှာ sensor တွေအများကြီးထည့်ထားရပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာ ဘယ်လို sensor တွေပါလဲ?? ဘာအတွက်ထည့်ထားတာလဲ စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ပြောပြသွားပါမယ်။
Proximity sensor ကတော့ စမတ်ဖုန်းအကုန်လုံးနီးနီးမှာ ပါတတ်တဲ့ sensor ပါပဲ။ အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုက proximity sensor ရှေ့ကပ်လာပြီဆိုရင် သူက အနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်းကိုလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ အလင်းပြန်လာရင်တော့ ရှေ့မှာအရာဝတ္ထုရှိတယ်ဆိုတာ သိနိုင်မှာပါ။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ သူသတ်မှတ်ထားတဲ့အကွာအဝေးတစ်ခုအတွင်းမှာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုရှိမရှိသိနိုင်ပြီး ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ထိုက်သင့်သလိုဆက်လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ ဥပမာ ဖုန်းပြောတဲ့အခါ နားနားကိုကပ်လိုက်ရင် screen အော်တိုပိတ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးက ဒီ proximity sensor ကြောင့်ပါပဲ။
Accelerometer နဲ့ Gryoscope
Accelerometer တွေကတော့ ဝင်ရိုးတွေရွေ့လျားသွားတာကို တိုင်းတာတဲ့ sensor တွေပါ။ များသောအားဖြင့် ဖုန်းတွေရဲ့ fitness tracker တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ wearable ပစ္စည်းတစ်ခု သက်သက်ဝယ်စရာတောင်မလိုဘဲ ကိုယ်လှမ်းသမျှခြေလှမ်းတိုင်းကို ခြေရာခံနိုင်တယ်ဆိုတာ ဒီ sensor တွေကြောင့်ပါ။ နာမည်လိုပဲ အရှိန်တိုင်း sensor ဆိုတော့ အရှိန်ကိုတိုင်းတာမှာပါပဲ။ ဒီ sensor ထဲမှာပါဝင်တဲ့ အရမ်းအရမ်းကိုသေးငယ်တဲ့ပုံဆောင်ခဲလေးတွေက အရှိန်နဲ့အားတစ်ခုခုသက်ရောက်လိုက်တာနဲ့ stress ဖြစ်သွားပြီး ပုံဆောင်ခဲတွေပေါ်သက်ရောက်လာတဲ့အားကို interpret လုပ်လိုက်တာနဲ့ ဖုန်းက ဘယ်လောက်မြန်မြန်ရွေ့သွားလဲ ဘယ်အရပ်ကိုဦးတည်သွားလဲဆိုတာသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းကိုဒေါင်လိုက်ထောင်သုံးနေရင်းက အလျားလိုက် landscape mode ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် သုံးနေတဲ့ app ကိုပါ အလျားလိုက်ပြောင်းဖို့ ဒီ sensor တွေကတစ်ဆင့်သိရပါတယ်။ ကားမောင်းတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဆော့တယ်ဆိုလည်း ဟိုဘက်စောင်း ဒီဘက်စောင်း ဘယ်လောက်ပမာဏစောင်းသွားတယ်ဆိုတာကို ဒီ sensor တွေက တိုင်းတာပေးပါလိမ့်မယ်။
Accelerometer တွေက အရှိန်ကိုတိုင်းတာတယ်ဆိုရင် Gryoscope တွေက လှည့်လိုက်တဲ့ ထောင့်ရဲ့ဒီဂရီကိုပါ တိုင်းရပါတယ်။ ဝင်ရိုးတစ်ခုကနေ ဘယ်ဘက်ကိုဘယ်လောက်ဒီဂရီလှည့်သွားလဲဆိုတာကို တိုင်းတာပေးပြီး 360 ဒီဂရီပုံတွေကိုကြည့်လိုက်ရင် ရှင်းလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
Fingerprint sensor ဆိုတာကတော့ လူတိုင်းမသိတဲ့သူမရှိလောက်တဲ့ sensor ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အမြင့်ပိုင်းဖုန်းတွေတင်မကတော့ပဲ mid-range ဖုန်းတွေမှာပါ တွေ့လာရတဲ့ sensor တစ်ခုပါ။ သာမန်လျှို့ဝှက်ကုဒ်တွေထက် ပိုစိတ်ချရတဲ့ လုံခြုံရေး sensor တစ်ခုလို့ ပြောရမှာပါ။
Fingerprint တင်မကဘဲ မျက်နှာအတည်ပြုစနစ်တွေ 3D facial recognition တွေ IRIS scanner တွေဆိုလည်း ဒီ biometric sensor တွေထဲမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်။
သူကတော့ နာမည်သိပ်မကြီးပေမယ့် ပြောရရင် ဖုန်းတွေမှာပါသင့်တဲ့ sensor တစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ user ရဲ့လက်ချောင်းထဲက သွေးကြောတွေရဲ့ တစ်မိနစ်အတွင်းသွေးခုန်နှုန်းကို တိုင်းတာပေးပြီး ကျန်းမာရေးကို ဂရုတစိုက်ရှိတဲ့လူတွေအတွက်တော့ ရှိသင့်တဲ့ sensor တစ်ခုပါပဲ။
ကျန်းမာရေးနဲ့ sensor တွေပတ်သတ်ပုံအကြောင်းပြောနေတော့ Pedometer တွေကိုလည်း ထည့်ပြောရပါတော့မယ်။ ကျန်းမာရေးလိုက်စားသူတွေအတွက်တော့ Pedometer ဆိုတာ အ၇မ်းကိုအရေးပါတဲ့ app တစ်ခုပါ။ ဒီ sensor တွေကတော့ user ရဲ့လှမ်းလိုက်တဲ့ခြေလှမ်းအရေအတွက်ကို လိုက်ရေတွက်တိုင်းတာပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆို Google Fit တို့ Gryoscope တို့လို app တွေမှာ ဒီ sensor မပါလည်းအလုပ်လုပ်နိုင်တာပဲလို့တွေးကောင်းတွေးပါလိ့မ်မယ်။ မှန်ပါတယ် အပေါ်မှာပြောခဲ့ဖူးသလို ခြေလှမ်းရေတွက်ဖို့အတွက်လောက်ကတော့ accelerator ကိုသုံးလည်းရနေလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် Pedometer နဲ့ဆိုရင်တော့ ပိုလည်းတိကျပြီး အားကုန်လည်းပိုသက်သာပါတယ်။
ဒီ sensor တွေကတော့ လေဖိအားကိုတိုင်းတာပေးပြီး ရလာတဲ့ဒေတာတွေကနေ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ဘယ်လောက်အမြင့်မှာရောက်နေပြီဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး GPS စနစ်ကိုလည်း ပိုတိကျစေပါတယ်
သူကတော့ ဖုန်းရဲ့ အတွင်းရောအပြင်ရောမှာရှိနေတဲ့ အပူချိန်ပမာဏကိုတိုင်းတာပေးပါတယ်။ ခုခေတ်ဆို စမတ်ဖုန်းအများစုမှာ ဖုန်းအတွင်းပိုင်းနဲ့ ဘက်ထရီအပူချိန်ကိုတိုင်းတာတဲ့ sensor နဲ့ အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အပူချိန်ကိုတိုင်းတာတဲ့ sensor ဆိုပြီး sensor ၂ခုပါလာကြပါပြီ။ ဖုန်းက အပူလွန်ကဲနေပြီဆိုရင် ဒီ sensor တွေကသိနိုင်ပြီး အဲဒီအချိန်မှာ system က performance လျှော့တာဖြစ်ဖြစ် အော်တို shutdown ချပစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရပါတယ်
သူကတော့ အလင်းပမာဏကိုတိုင်းတာတဲ့ sensor တစ်ခုပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အလင်းပမာဏကို အာရုံခံနိုင်ပြီး ရလာတဲ့ဒေတာကိုသုံးပြီးမှ ဆော့ဖဲဝဲလ်ကတစ်ဆင့် ဖုန်းရဲ့ brightness ကိုချိန်ညှိပေးပါတယ်။ ဥပမာ နေရောင်အောက်မှာလိုမျိုး အလင်းအရမ်းများတဲ့နေရာမျိုးမှာ ဖုန်းရဲ့ screen အလင်းကိုမြှင့်လိုက်ပြီး မှောင်တဲ့ညနေ ညခင်းအချိန်မျိုး အလင်းအားနည်းတဲ့နေရာမျိုးမှာတော့ ဖုန်းရဲ့ brightness ကို သင့်သလိုလျှော့ပေးပါတယ်။ ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ Auto brightness ဆိုတာက ဒီ sensor တွေကိုသုံးပြီးလုပ်သွားတာပါ။
သူကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းကို ဝင်ရိုး၃ခုနဲ့တိုင်းတာပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ရဲ့သံလိုက်ဆွဲအားကိုကြည့်ပြီးမှ ကိုယ်က ဘယ်အရပ်ကိုမျက်နှာမူထားလဲ မြောက်ဘက်လား တောင်ဘက်လားဆိုတာကို သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စွန့်စားခန်းခရီးတွေသွားတဲ့အခါတော့ တော်တော်အသုံးတည့်တဲ့ sensor လေးပါ။
ကင်မရာ sensor တွေအကြောင်းကတော့ နည်းနည်းကျယ်ပြန့်တာမို့ ကျန်သေးတဲ့ sensor တွေနဲ့အတူ တစ်ရက်သက်သက်အကျယ်ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ အခုဖော်ပြခဲ့တာတွေကတော့ စမတ်ဖုန်းတွေမှာ ပါတတ်တဲ့ sensor တွေအကြောင်းဖြစ်ပြီး သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ ဘာအတွက်အသုံးဝင်လဲဆိုတာတွေပါ။
စမတျဖုနျးတှဆေိုတာ မတူညီတဲ့လုပျငနျးဆောငျတာတှကေိုလုပျဆောငျနိုငျတဲ့ မတူညီတဲ့ပစ်စညျးတှကေို ကဈြကဈြလဈြလဈြစုပေါငျးထားတဲ့ပစ်စညျးတဈမြိုးလို့တောငျ ပွောရမလိုပါပဲ။ အမွငျ့စားကငျမရာတှကေစလို့ GPS ထောကျလှမျးနိုငျတာတှအေထိ၊ screen အလငျးကိုအျောတိုခြိနျညှိနိုငျတာကစလို့ ကိုယျ့ကနျြးမာရေးကို စောငျ့ကွညျ့ပေးနိုငျတာတှအေထိ ဒီလို စုံစီနဖာလုပျငနျးတှကေိုလုပျဆောငျနိုငျဖို့အတှကျ ပါးပါးသေးသေးစမတျဖုနျးထဲမှာ sensor တှအေမြားကွီးထညျ့ထားရပါတယျ။ ဒီနတေ့ော့ စမတျဖုနျးတဈလုံးမှာ ဘယျလို sensor တှပေါလဲ?? ဘာအတှကျထညျ့ထားတာလဲ စတဲ့အကွောငျးအရာတှကေို ပွောပွသှားပါမယျ။
Proximity sensor ကတော့ စမတျဖုနျးအကုနျလုံးနီးနီးမှာ ပါတတျတဲ့ sensor ပါပဲ။ အရာဝတ်ထုတဈခုခုက proximity sensor ရှကေ့ပျလာပွီဆိုရငျ သူက အနီအောကျရောငျခွညျအလငျးကိုလှတျလိုကျပါတယျ။ အလငျးပွနျလာရငျတော့ ရှမှေ့ာအရာဝတ်ထုရှိတယျဆိုတာ သိနိုငျမှာပါ။ ဒီနညျးလမျးနဲ့ သူသတျမှတျထားတဲ့အကှာအဝေးတဈခုအတှငျးမှာ အရာဝတ်ထုတဈခုရှိမရှိသိနိုငျပွီး ရှိတယျဆိုရငျတော့ ထိုကျသငျ့သလိုဆကျလုပျဆောငျသှားမှာပါ။ ဥပမာ ဖုနျးပွောတဲ့အခါ နားနားကိုကပျလိုကျရငျ screen အျောတိုပိတျသှားတယျဆိုတာမြိုးက ဒီ proximity sensor ကွောငျ့ပါပဲ။
Accelerometer နဲ့ Gryoscope
Accelerometer တှကေတော့ ဝငျရိုးတှရှေလြေ့ားသှားတာကို တိုငျးတာတဲ့ sensor တှပေါ။ မြားသောအားဖွငျ့ ဖုနျးတှရေဲ့ fitness tracker တှမှောတှရေ့ပါတယျ။ wearable ပစ်စညျးတဈခု သကျသကျဝယျစရာတောငျမလိုဘဲ ကိုယျလှမျးသမြှခွလှေမျးတိုငျးကို ခွရောခံနိုငျတယျဆိုတာ ဒီ sensor တှကွေောငျ့ပါ။ နာမညျလိုပဲ အရှိနျတိုငျး sensor ဆိုတော့ အရှိနျကိုတိုငျးတာမှာပါပဲ။ ဒီ sensor ထဲမှာပါဝငျတဲ့ အရမျးအရမျးကိုသေးငယျတဲ့ပုံဆောငျခဲလေးတှကေ အရှိနျနဲ့အားတဈခုခုသကျရောကျလိုကျတာနဲ့ stress ဖွဈသှားပွီး ပုံဆောငျခဲတှပေျေါသကျရောကျလာတဲ့အားကို interpret လုပျလိုကျတာနဲ့ ဖုနျးက ဘယျလောကျမွနျမွနျရှသှေ့ားလဲ ဘယျအရပျကိုဦးတညျသှားလဲဆိုတာသိရှိနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ဖုနျးကိုဒေါငျလိုကျထောငျသုံးနရေငျးက အလြားလိုကျ landscape mode ပွောငျးလိုကျမယျဆိုရငျ သုံးနတေဲ့ app ကိုပါ အလြားလိုကျပွောငျးဖို့ ဒီ sensor တှကေတဈဆငျ့သိရပါတယျ။ ကားမောငျးတဲ့ဂိမျးတဈခုဆော့တယျဆိုလညျး ဟိုဘကျစောငျး ဒီဘကျစောငျး ဘယျလောကျပမာဏစောငျးသှားတယျဆိုတာကို ဒီ sensor တှကေ တိုငျးတာပေးပါလိမျ့မယျ။
Accelerometer တှကေ အရှိနျကိုတိုငျးတာတယျဆိုရငျ Gryoscope တှကေ လှညျ့လိုကျတဲ့ ထောငျ့ရဲ့ဒီဂရီကိုပါ တိုငျးရပါတယျ။ ဝငျရိုးတဈခုကနေ ဘယျဘကျကိုဘယျလောကျဒီဂရီလှညျ့သှားလဲဆိုတာကို တိုငျးတာပေးပွီး 360 ဒီဂရီပုံတှကေိုကွညျ့လိုကျရငျ ရှငျးလိမျ့မယျထငျပါတယျ။
Fingerprint sensor ဆိုတာကတော့ လူတိုငျးမသိတဲ့သူမရှိလောကျတဲ့ sensor ဖွဈမယျထငျပါတယျ။ အမွငျ့ပိုငျးဖုနျးတှတေငျမကတော့ပဲ mid-range ဖုနျးတှမှောပါ တှလေ့ာရတဲ့ sensor တဈခုပါ။ သာမနျလြှို့ဝှကျကုဒျတှထေကျ ပိုစိတျခရြတဲ့ လုံခွုံရေး sensor တဈခုလို့ ပွောရမှာပါ။
Fingerprint တငျမကဘဲ မကျြနှာအတညျပွုစနဈတှေ 3D facial recognition တှေ IRIS scanner တှဆေိုလညျး ဒီ biometric sensor တှထေဲမှာအကြုံးဝငျပါတယျ။
သူကတော့ နာမညျသိပျမကွီးပမေယျ့ ပွောရရငျ ဖုနျးတှမှောပါသငျ့တဲ့ sensor တဈခုလို့မွငျပါတယျ။ သူ့ရဲ့အလုပျလုပျပုံကတော့ ရိုးရှငျးပါတယျ။ user ရဲ့လကျခြောငျးထဲက သှေးကွောတှရေဲ့ တဈမိနဈအတှငျးသှေးခုနျနှုနျးကို တိုငျးတာပေးပွီး ကနျြးမာရေးကို ဂရုတစိုကျရှိတဲ့လူတှအေတှကျတော့ ရှိသငျ့တဲ့ sensor တဈခုပါပဲ။
ကနျြးမာရေးနဲ့ sensor တှပေတျသတျပုံအကွောငျးပွောနတေော့ Pedometer တှကေိုလညျး ထညျ့ပွောရပါတော့မယျ။ ကနျြးမာရေးလိုကျစားသူတှအေတှကျတော့ Pedometer ဆိုတာ အ၇မျးကိုအရေးပါတဲ့ app တဈခုပါ။ ဒီ sensor တှကေတော့ user ရဲ့လှမျးလိုကျတဲ့ခွလှေမျးအရအေတှကျကို လိုကျရတှေကျတိုငျးတာပေးနမှောဖွဈပါတယျ။
ဒါဆို Google Fit တို့ Gryoscope တို့လို app တှမှော ဒီ sensor မပါလညျးအလုပျလုပျနိုငျတာပဲလို့တှေးကောငျးတှေးပါလိ့မျမယျ။ မှနျပါတယျ အပျေါမှာပွောခဲ့ဖူးသလို ခွလှေမျးရတှေကျဖို့အတှကျလောကျကတော့ accelerator ကိုသုံးလညျးရနလေို့ပါ။ ဒါပမေယျ့ Pedometer နဲ့ဆိုရငျတော့ ပိုလညျးတိကပြွီး အားကုနျလညျးပိုသကျသာပါတယျ။
ဒီ sensor တှကေတော့ လဖေိအားကိုတိုငျးတာပေးပွီး ရလာတဲ့ဒတောတှကေနေ ပငျလယျရမေကျြနှာပွငျအထကျ ဘယျလောကျအမွငျ့မှာရောကျနပွေီဆိုတာသိနိုငျပါတယျ။ နောကျပွီး GPS စနဈကိုလညျး ပိုတိကစြပေါတယျ
သူကတော့ ဖုနျးရဲ့ အတှငျးရောအပွငျရောမှာရှိနတေဲ့ အပူခြိနျပမာဏကိုတိုငျးတာပေးပါတယျ။ ခုခတျေဆို စမတျဖုနျးအမြားစုမှာ ဖုနျးအတှငျးပိုငျးနဲ့ ဘကျထရီအပူခြိနျကိုတိုငျးတာတဲ့ sensor နဲ့ အပွငျပတျဝနျးကငျြရဲ့အပူခြိနျကိုတိုငျးတာတဲ့ sensor ဆိုပွီး sensor ၂ခုပါလာကွပါပွီ။ ဖုနျးက အပူလှနျကဲနပွေီဆိုရငျ ဒီ sensor တှကေသိနိုငျပွီး အဲဒီအခြိနျမှာ system က performance လြှော့တာဖွဈဖွဈ အျောတို shutdown ခပြဈတာပဲဖွဈဖွဈလုပျရပါတယျ
သူကတော့ အလငျးပမာဏကိုတိုငျးတာတဲ့ sensor တဈခုပါ။ ပတျဝနျးကငျြမှာရှိတဲ့အလငျးပမာဏကို အာရုံခံနိုငျပွီး ရလာတဲ့ဒတောကိုသုံးပွီးမှ ဆော့ဖဲဝဲလျကတဈဆငျ့ ဖုနျးရဲ့ brightness ကိုခြိနျညှိပေးပါတယျ။ ဥပမာ နရေောငျအောကျမှာလိုမြိုး အလငျးအရမျးမြားတဲ့နရောမြိုးမှာ ဖုနျးရဲ့ screen အလငျးကိုမွှငျ့လိုကျပွီး မှောငျတဲ့ညနေ ညခငျးအခြိနျမြိုး အလငျးအားနညျးတဲ့နရောမြိုးမှာတော့ ဖုနျးရဲ့ brightness ကို သငျ့သလိုလြှော့ပေးပါတယျ။ ဖုနျးတှမှောပါတဲ့ Auto brightness ဆိုတာက ဒီ sensor တှကေိုသုံးပွီးလုပျသှားတာပါ။
သူကတော့ ပတျဝနျးကငျြမှာရှိတဲ့ သံလိုကျစကျကှငျးကို ဝငျရိုး၃ခုနဲ့တိုငျးတာပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ရဲ့သံလိုကျဆှဲအားကိုကွညျ့ပွီးမှ ကိုယျက ဘယျအရပျကိုမကျြနှာမူထားလဲ မွောကျဘကျလား တောငျဘကျလားဆိုတာကို သိနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ စှနျ့စားခနျးခရီးတှသှေားတဲ့အခါတော့ တျောတျောအသုံးတညျ့တဲ့ sensor လေးပါ။
ကငျမရာ sensor တှအေကွောငျးကတော့ နညျးနညျးကယျြပွနျ့တာမို့ ကနျြသေးတဲ့ sensor တှနေဲ့အတူ တဈရကျသကျသကျအကယျြဖျောပွပေးပါ့မယျ။ အခုဖျောပွခဲ့တာတှကေတော့ စမတျဖုနျးတှမှော ပါတတျတဲ့ sensor တှအေကွောငျးဖွဈပွီး သူတို့ဘယျလိုအလုပျလုပျသလဲ ဘာအတှကျအသုံးဝငျလဲဆိုတာတှပေါ။